Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah uga tagaya Muqdisho & dalka uu usocdo oo…. | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home English News Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah uga tagaya Muqdisho & dalka...
Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah uga tagaya Muqdisho & dalka uu usocdo oo….
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu wadaa inuu socdaal kale dibadda ugu dhoofo 48 saacad kadib markii uu ka soo laabtay dalka Kenya.
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa lagu casuumay shir madaxeedka dalalka Jaamacadda Carabta ee ka dhici doona magaalada Cammaan ee dalka Urdun, waxaana la xaqiijiyay inuu ka qeybgeli doono oo aanu ka cudurdaaran.
Shir madaxeedka Jaamacadda Carabta ee sanadan 2017 waxaa ka qeyb geli doona Boqorka Sacuudiga iyo madax badan oo Carbeed, iyadoo muddo dheer kadib uu tegi doono Boqorka Marooko Boqor Maxamed-ka lixaad, waxaa kaliya oo marnaan doona kursiga dalka Suuriya oo hore looga saaray dowladda Bashaar Al-asad.
Shirka ayaa furmi doona Arbacadda 29-ka bishan Maarso iyadoo ay horeyn doonaan shirarka wasiirada arrimaha dibadda dalalka Arbacadda, waxaana arrimaha looga hadlayo ugu horeeya dhibaatooyinka ka taagan dalalka Carabta.
Waa safarkii saddexaad ee Madaxweyne Famaajo ugu dhoofayo dibadda muddop 40 casho gudahood ah intii xilka madaxweyne loo doortay horaantii bisha Febraayo 2017.
Previous articleDeg;Deg;Imisa Saacadood ayaa ka harsan Waqtigii loo qabtay R/wasaare Kheyre inuu Xukuumadiisa ku horkeeno BF
Next articleMadaxweynaha Hirshabelle Oo Beledweyne Kula Kulmay Saraakiil Ka Tirsan QM+(Sawirro)